जीवन बिमा कम्पनीहरु को नाफा कति? कुन को अबस्था कस्तो हेर्नुहोस – Esancharpati
जीवन बिमा कम्पनीहरु को नाफा कति? कुन को अबस्था कस्तो हेर्नुहोस
काठमाडौ : नेप्सेमा सूचीकृत ७ वटै जीवन बिमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । अधिकांश इन्सुरेन्स कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेका छन् । तर पुँजी वृद्धिकै अनुपातमा नाफा बढाउन नसक्दा प्रतिसेयर आम्दानी घटेको देखिन्छ ।
यता, जीवन बिमा कम्पनीहरुले पुँजी बढाएपनि बिमा समितिले तोके अनुसार पुग्न सकेको छैन । बिमा समितिले निर्धारण गरेको चुक्ता पुँजी २ जीवन बिमा कम्पनीले मात्रै पुर्याएका छन् । दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीहरुले जगेडा कोषमा सुधार गरेको देखिन्छ ।
दुई कम्पनीको मात्र पुग्यो चुक्ता पुँजी, सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफको :
जीवन बिमा कम्पनीको लागि बिमा समितिले पुस मसान्तसम्म २ अर्ब पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म दुई कम्पनीको मात्रै पुँजी पुगेको छ । चुक्ता पुँजी पुर्याउनेमा नेपाल लाइफ र नेसनल लाइफ रहेका छन् । नेपाल लाइफको सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँ पुँजी रहेको छ । इन्सुरेन्सले गत वर्ष भन्दा ४२% ले पुँजी बढाएको हो । साथै, नेशनल लाइफ ६०% पुँजी बढाएर २ अर्ब ६४ करोड ९७ लाख २७ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको छ । यता, गुराँस लाइफ र लाइफ इन्सुरेन्सको पुँजीमा कुनै थपघट भएको छैन ।
नेपाल लाइफ बाहेक अरुको जगेडा कोष बढ्यो :
पुस मसान्तसम्ममा नेपाल लाइफले बाहेक अन्य जीवन बिमा कम्पनीले जगेडा कोष बढाएका छन् । नेपाल लाइफको जगेडा कोष भने गत वर्षको तुलनामा २५.७१% ले घटेर ३ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यता, नेसनल लाइफको जगेडा कोष भने १४३.३६% ले बढेर ९५ करोड ५१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
सबैभन्दा धेरै जीवन बिमा कोष नेपाल लाइफको :
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा सबैभन्दा धेरै बिमा कोष नेपाल लाइफको रहेको छ । नेपाल लाइफको जीवन बिमा कोष गत वर्षको भन्दा २४.३३% ले बढेर ५६ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष कम्पनीको जीवन बिमा कोषमा ४५ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । लाइफ इन्सुरेन्सको जीवन बिमा कोष २७.३८% ले बढेर ४८ अर्ब ६८ करोड ७० लाख ५६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्राइम लाइफ बाहेक अन्यको नाफा बढ्यो :
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स बाहेक अन्य कम्पनीको खुद नाफा बढेको छ । प्राइमको नाफा भने गत वर्षको भन्दा २१.४१% ले घटेर ९ करोड ५ लाख २६ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । गत वर्ष कम्पनीले ११ करोड ५१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यता, सबैभन्दा धेरै नाफा लाइफ इन्सुरेन्सले कमाएको छ । लाइफ इन्सुरेन्सको नाफा ६.१८% ले बढेर ७१ अर्ब ७८ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
५ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घट्यो :
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ७ जीवन बिमा कम्पनीमध्ये ५ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी घट्नेमा नेपाल लाइफ, सूर्या लाइफ, एसियन लाइफ, नेसनल लाइफ र प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन् । यीमध्ये प्राइम लाइफको प्रतिसेयर आम्दानी सर्वाधिक २७ रुपैयाँ ६२ पैसाले घटेर १० रुपैयाँ १४ पैसामा झरेको छ ।
यता, प्रतिसेयर आम्दानी बढाउनेमा गुराँस लाइफ र लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेका छन् । बढेका दुई कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी पनि सामान्य पैसाले मात्रै बढेको छ । गुराँसको ९२ पैसा र लाइफको ३१ पैसाले मात्रै प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ । साथै, सूर्या लाइफको प्रतिसेयर आम्दानी १ रुपैयाँ १ पैसाले घटे पनि सर्वाधिक प्रतिसेयर आम्दानी रहेको छ । कम्पनीको पुस मसान्त सम्म प्रतिसेय आम्दानी १९ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ । अन्तैबाट
नेपालमा पहिलोपटक जापानीज भाषासम्बन्धि ‘ई–लर्निङ सेमिनार’ सम्पन्न
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना भट्टराईको चेतावनी ः ‘माग सम्बोधन नभए मन्त्रालयमै आत्मघाती बनेर पड्किनेछु’
Selecting Simple Systems In papersowl review reviewingwriting
आप्पाको विश्व कीर्तिमान कामीद्धारा भंग